Tag: nkọwa meta | Martech Zone
Tag: meta nkọwa
Gịnị bụ nkọwa Meta? Gini mere ha ji di oke nkpa na atumatu uzo ocha?
Tuzdee, Machị 23, 2021 Tuzdee, Machị 23, 2021 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ ndị na-ere ahịa anaghị ahụ oke ọhịa maka osisi. Dika njikarịcha nke nchọta ihe enweela nlebara anya na afọ iri gara aga, achọpụtara m na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya nke ọma n'ọkwá na ọnụọgụ nri na-esote, ha na-echefu usoro ahụ mere n'ezie n'etiti. Nchọgharị ọchụchọ dị oke mkpa na azụmaahịa ọ bụla nwere ike ịchụpụ ndị ọrụ nwere ebumnuche na ibe gị na saịtị nke na-azụta ebumnuche ngwaahịa na ọrụ gị. Na meta
Wzọ 5 Ihe Omume Kalinda gị nwere ike imeziwanye SEO
Tuesday, October 4, 2016 Putman-Garcia nke Krystal
Ihe ochicho njini Search (SEO) bu agha enweghi njedebe. N'otu aka, ị nwere ndị ahịa na-achọ ịkwalite ibe weebụ ha iji melite nhazi na njikwa njikwa ọchụchọ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ndị ọrụ injinịa ọchụchọ (dịka Google) na-agbanwe agbanwe algọridim ha iji nabata usoro ọhụụ ọhụụ, amaghi ma mekwaa ka mma, ịnyagharịa na websaịtị ahaziri iche. Offọdụ n'ime ụzọ kachasị mma iji bulie ogo ọchụchọ gị gụnyere ịba ụba nke ibe ibe yana
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa maka ịmepụta SEO na-emeri SEO na-emeziwanye usoro ọchụchọ ọchụchọ Google gị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Google na-etinyekarị ihe nchọta ọchụchọ ha na algorithm, enwere ụfọdụ usoro kachasị mma iji bido ịmalite imezi ya, nke ga-eme ka ị banye na Top 10 ọla edo ahụ na ibe mbụ ma hụ na ị so n'ihe mbụ ndị ahịa nwere ike ịhụ mgbe ị na-eji ọchụchọ Google. Kọwaa ndepụta isiokwu
Tọzdee, Eprel 29, 2010 Monday, April 11, 2016 Douglas Karr
Nyaahụ, emere m ọzụzụ na njikarịcha njin ọchụchọ ma kpọọ ndị na-emepụta ihe, ndị na-ede akwụkwọ, ụlọ ọrụ na ọbụlagodi ndị asọmpi ịbịa ọzụzụ ahụ. Ọ bụ ụlọ zuru oke ma gaa nke ọma. Ntinye na engines ọchụchọ abụghị azịza ya mgbe niile - ụlọ ọrụ ga-enwerịrị ọdịnaya dị irè, saịtị dị mma, yana ụzọ ha ga-esi soro ụlọ ọrụ ahụ rụọ ọrụ. Ana m eche onwe m dị ka ọkachamara njikarịcha search engine. Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, enwere m ike